Published Tue Jan 15 2019 18:26:40 GMT+0000 (UTC)
A street scene at the end of a day of demonstrations over hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan,15, 2019. Soldiers moved in to disperse crowds at the busy intersection and transport hub in Harare amid Zimbabwe's biggest unrest since deadly post-election violence in August. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa, center, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 15, 2019. The president of Zimbabwe, whose country is facing its worst economic crisis in a decade, is visiting Russia in hopes of securing long-term loans. (Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP)
A man walks past a deserted street following demonstrations over hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan,15, 2019. Soldiers moved in to disperse crowds at the busy intersection and transport hub in Harare amid Zimbabwe's biggest unrest since deadly post-election violence in August. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A soldier drives an army truck as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa, left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 15, 2019. The president of Zimbabwe, whose country is facing its worst economic crisis in a decade, is visiting Russia in hopes of securing long-term loans. (Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP)
A portrait of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa is seen at the party headquarters during demonstrations over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A human rights group in Zimbabwe says five people were killed in clashes between demonstrators protesting fuel hikes and security forces who opened fire on some crowds. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Soldiers remove rocks from the road as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A soldier monitors the removal of a barricade as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Russian President Vladimir Putin, right, and Zimbabwe's President Emmerson Dambudzo Mnangagwa shake hands during their meeting in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 15, 2019. (Sergei Chirikov/Pool Photo via AP)
Protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A soldier patrols as a barricade is removed during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Russian President Vladimir Putin, right, and Zimbabwe's President Emmerson Dambudzo Mnangagwa shake hands after a signing ceremony during his meeting with in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 15, 2019. (Sergei Chirikov/Pool Photo via AP)
Women inspect their stalls at a market after they were destroyed during demonstrations over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. Soldiers moved in to disperse crowds at the busy intersection and transport hub in Harare amid Zimbabwe's biggest unrest since deadly post-election violence in August. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A soldier patrols as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Soldiers patrol near a barricade A soldier patrols as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Soldiers patrol the streets as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Plain clothed soldiers remove the barricade as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa, right, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 15, 2019. The president of Zimbabwe, whose country is facing its worst economic crisis in a decade, is visiting Russia in hopes of securing long-term loans. (Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP)
A helicopter fires teargas onto protestors during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tires in the capital on a second day of deadly protests after the government more than doubled the price of fuel in the economically shattered country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)